I-LNG T75 ISO Tank Container-LNG yezoThutho kunye noGcino-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>amandla>Ukuhamba kunye nokuGcinwa kwe-LNG
Isicelo: ukugcinwa kwe-LNG kunye nokuhamba.
Iimpahla zisetyenziswa ngokubanzi ukuhambisa i-cryogenic bulk LNG-kwihlabathi liphela ngenqanawa, kaloliwe okanye ngendlela. Izikhongozeli zethu ze-ISO ziyafumaneka kuluhlu olubanzi loxinzelelo olusebenzayo ukusuka kwi-0.8-2.2MPa.
Ii-Pls zibonisa iiparameter zesikhongozeli osifunayo, kubandakanya ukwenziwa komgangatho, uxinzelelo olusebenzayo, ukuzalisa okuphakathi (uhlobo olunye kuphela lwendlela ephakathi okanye eyahlukeneyo), ii-pls zikwabonisa ubungakanani obafunayo. Ubungakanani be-8ft kunye ne-22ft.
Imilinganiselo yokwenziwa kubandakanya i-EN, i-ASME, i-GB, kwaye sikwabonelela ngesatifikethi se-CSC se-LIoyd, isatifikethi se-BV okanye iSatifikethi seCCS.
Singabonelela ngezivalo zase China kunye nezivalo zamanye amazwe. Kwaye siya kubonelela uluhlu lwevalve xa sele kuqinisekisiwe.